Gabadh Amakaagtay Kadib Markay Furtay Warqad Tacsi ah oo In ay Geeriyootay Lagu Sheegaayo | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: August 25, 2014, 11:07 am
Haweenay waayeel ah oo 80 jir ah, ayaa shirkad kuwa dadka wayeelka ah amma hawlgabka ah gacanta ku haysaau soo dirtay waraaq ay ku tilmaamayso in ay laf ahaanteedu geeriyootay, tacsina loo diraayo, taasoo aad u naxday.
Shirkadda Standar Life, ayaa tacsidan u dirtay gabadhan, taasoo qofkii loo dhiibay uu geeyey cinwaankii ku qornaa, kadib markii ay waraaqda akhriday waxay ka war heshay in laf ahaanteeda lagu sheegaayo in ay geeriyooday, lana joojiyey lacagtii yarayd ee la siin jiray.
Gabadhan oo aan magaceeda la sheegin, ayaa sheegtay in ay aad uga murugootay waraaqda loo soo diray, taasoo taariikhda la soo diray ahayd July 2014, laguna tilmaamay in ay dhimatay.
“Waxaan aad uga xumaaday in aan ogaado dhimashada gabadhaas, markii bangigu nagu soo celiyey lacagtii June la siin lahaa, waxaanan ka codsaday dadki iga sarreeyey in ay tacsi ka socota shirkadda u diraan,” ayuu yidhi Mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaas.
Geesta kale, Afhayeen u hadlay shirkadda khaladka gashay, ayaa sheegay in aaduga xun yihiin inuu khaladkaas dhaco, raalligelina ay ka bixinayaan, dibna u eegi doonaan sida wax u dhaceen.